တပ်ဦး Loading ငွေ Drop Safe DD-5037-ထံမှ Weierxin Safe စက်ရုံ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စီးပွားရေးလုံခြုံမှု > အပ်ငွေများ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခလုတ်ရှေ့တွင် Mail Drop Mail Drop Safe Box Safe Box ဆက်ခံ TB-515
GS-1450-400 -450-400 -450-400 -450-400 - WEIERXIN SAFE ထုတ်လုပ်သူမှအမြန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
* ပစ္စည်း: Solid သံမဏိ
* Size: H500 * W370 * D300mm
* Lock ကို: အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်
* ဘက်ထရီ: 4x AAA
1 ။ ထိပ်ပေါ်မှာတစ်စက် slot ကအတူသံမဏိသိုက် Safe
2 ။ လျှို့ဝှက်ချက် PIN ကုဒ်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းသော့နှင့်အတူပွင့်လင်း။
3 ။ Safe တံခါးကိုညာဘက်ဖွင့်လှစ်။
4 ။ anchoring ခွင့်ပြုသော့ခလောက်ပြုပြင်တာတွေအတူ Safe အတွင်းပိုင်း PR-တူးတွင်း။
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကို 100% စမ်းသပ်နှင့် QC စစ်ဆေးခြင်းများ ဖြန့်ဝေမီ။
A: ဟုတ်ကဲ့။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, ထုပ်ပိုး, အရောင်နှင့်လိုဂိုကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအဲဒီ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်ပြီ။
3. ကျနော်တို့ OEM ကိုထောကျပံ့& လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု။
4. ကျနော်တို့အီး, ROSH, FCC သည်လွန်ပြီ။
2004 ကတည်းက Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်, အတွင်းတည်ရှိပြီး Foshan Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှထက်ပို 23000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 100 ကျော်န်ထမ်းရှိပါတယ်, 10 နှစ်ကျော် Safe ထုတ်လုပ်အတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းပါပဲ။ Weierxin ကို Safe Safe အိမ် Safe, ရုံး Safe, ဟိုတယ် Safe, winder Safe watch, သံမဏိကက်ဘိနက်, သေနတ် Safe, ဖိုင်များ Safe, ငွေသား box ကို Vault တံခါးကိုနှင့်အခြားမြင့်မားတဲ့ဖန်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန် fireproof ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး။ ကျနော်တို့အီး, ROHS, FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်လွန်ပါတယ်။ ထက်ပိုမို 500,000 ယူနစ်များ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစကေးနှင့်အတူ, ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံအဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုကြသည်, ဟိုတယ်စသည်တို့ Weierxin ကို Safe အလုပ်နှင့်ကစား, လူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ဘယ်မှာစိတ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ငြိမ်းချမ်းရေးပေးပါသည်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချ, အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုပြီ အကောင်းဆုံး-In-class ကိုတန်ဖိုးအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကတိပေးသောငါတို့စျေးကွက်၌တည်၏။ Weierxin ကို Safe ပြည်တွင်းစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 1000 ကုန်သည်တွေရှိပါတယ်, ကျော်5သန်းသစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လည်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တင်ပို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ OEM ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ 2004 ကတည်းကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစဉ်ဆက်မပြတ် optimized နှင့်တိုးတက်နှင့်နောက်လိုက်ဖို့သစ္စာစောင့်သိသည်အသုံးပြုသူများနေဆဲရှိပါတယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကောင်းသော OEM နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုတက် builted ပါပြီ& OMD experience.OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ကြိုဆိုနေကြသည်။ ကျနော်တို့ R ကို၌ကြီးသောအားသာချက်ရှိ&: D, အထူးသဖြင့် fireproof Safe အပေါ်ဖောက်သည် Safe ၏စည်းဝေးပွဲကို။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလုပ်လုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ခံမှုအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် viewd နေကြသည်။
* ကြီးမားသော 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိပြားတံခါးတံခါး။* မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိကိုယ်ထည်။* built-in Pry ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသည် 30 မီလီမီတာရှိသည်။* Lock: Digital Keypad ဖြင့်အီလက်ထရောနစ်သော့ခတ်ခြင်း။* တံခါးကို 183 ဒီဂရီအထိဖွင့်နိုင်သည်။* Bolt Detent System သည်သော့ခလောက်နှင့်တံခါးကိုပိတ်သောအခါတံခါးကိုအလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားသည်။
ပစ္စည်း: သံမဏိအရွယ်အစား: H1450 * w400 * d300mmအထူ: တံခါး - 2mm, ခန္ဓာကိုယ် -2mmအရောင်: အနက်ရောင်Lock type: Electronic, လက်ဗွေ, သော့N. w .: 48 ကီလိုဂရမ်
High Quality ထိပ်တန်းအံဆွဲမီနူးကို Safe Box ကို Touch ကိုမျက်နှာပြင် Eh-top-JH လက်ကားဖွင့်လှစ် - Foshan Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှ
* Size: H130 * W380 * D350mm* Lock ကို: အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Lock ကို + လက်ဗွေ* စွမ်းဆောင်ရည်: 14 "-15" လက်ပ်တော့* အရောင်: Black က* သစျပွုပွငျတွင်း: နောက်ကျောများတွင်4ပေါက်တွေ* သက်ဆိုင်သောရှုခင်း: ဟိုတယ်အခန်း / ရုံး / အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုအခန်း / ဧည့်ခန်း
စိတ်ကြိုက်2နာရီ Fireproof ဖိုင်မှတ်တမ်းဝန်ကြီးအဖွဲ့ FC အသင်း-4 ထုတ်လုပ်သူ-Foshan Weierxin ကို Safe
* Size: H1530 * W530 * D680mm* မီးသတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်:2နာရီ* Lock ကို: LCD ကိုအတူအီလက်ထရောနစ်ဂဏန်းသော့ခတ်* တစ်ခုချင်းစီကိုအံဆွဲတစ်ဦးချင်းမီးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်* လွတ်လပ်သောအံဆွဲသော့ခတ်ယန္တရား* အားလုံးအံဆွဲတဦးတည်းကို manual သော့ခတ်နေဖြင့်လုံခြုံကြသည်3 အရွယ်အစား၏ * ရွေးချယ်မှု, 2,3သို့မဟုတ်4အံဆွဲ 'ဗားရှင်း
အသေးစားအရွယ်အစားမီးနှိပ်ခံထားရတဲ့သေတ္တာ - Foshan Weierxin Safe
မူလစာမျက်နှာလုံခြုံစိတ်ချရသောသေတ္တာ Ms-600 အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအကောင်းဆုံးစျေး - Weierxin Safe
မော်ဒယ် No ။ : Ms-600ပြင်ပအရွယ်အစား: H600 * W400 * D330mmပြည်တွင်းအရွယ်အစား: H590 * w390 * d319mmn.w .:3kg